Open Collective and Anartist - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောယဉ်ကျေးမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များ | Linux မှ
ဒီနေ့ငါတို့သိမှာပါ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၂ ခု ထို့အပြင်သူတို့သည်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း ဒါကaကိုအားပေးအားမြှောက် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းယဉ်ကျေးမှုတစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာအမြင် ကြည့်ပါ၊ အချို့သောအမှုအရာသို့မဟုတ်အခြေအနေများ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ် ၂ ခုမှာ - «Open Collective » y «အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ".
တိုတိုပြောရရင်, «Open Collective » ရန်ပုံငွေကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပူးပေါင်းအဖွဲ့များသည်ငွေများကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှာဖွေစုဆောင်းရန်နှင့်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ စဉ်တွင်, «အနုပညာရှင်တစ်ယောက် " ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုကိုအဓိကထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှများသောအားဖြင့်သူတို့၏အလုပ်များကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အခမဲ့ကိရိယာများကိုအဖွဲ့ဝင်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း။
ငါအကြောင်းပြောနေတာမစတင်မီ «Open Collective » y «အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ", ပုံမှန်အတိုင်း, ငါတို့အချို့အကြံပြုလိမ့်မယ် သက်ဆိုင်သောယခင်ပို့စ်များ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြီနောက်ဆုံးပေါ်အေးမြသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ခြင်း «SUChat” ဟုဖော်ပြသည်။
"သင်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုလေးစားပြီးလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသော XMPP protocol ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်ဗဟိုမှခွဲဝေထားသောအများပြည်သူသုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ Jabber / XMPP ကိုထောက်ပံ့သော client တစ်ခုကို download လုပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများ ထပ်မံ၍ လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့်လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပါ။" SUChat: ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပြည်သူ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးဝန်ဆောင်မှု
1 Collective နှင့် Anartist ကိုဖွင့်ပါ
1.1 Open Collective ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Anartist ဆိုတာဘာလဲ
Collective နှင့် Anartist ကိုဖွင့်ပါ
Open Collective ဆိုတာဘာလဲ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် စံပြ website ဘယ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် (ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများ၊ ပိုက်ဆံမြှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပေး ၎င်းကိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောစီမံကိန်းများ၏ထောက်ပံ့မှုကိုလိုလားသူများ၏အကျိုးအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့်။
«Open Collective » များသောအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားအလားတူ platform များနှင့်ကွဲပြားသည် အပြည့်အဝဘဏ္financialာရေးပွင့်လင်းမြင်သာဆိုလိုသည်မှာပိုက်ဆံသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်၊ မည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ထုတ်ကုန်များကိုအမြဲတမ်းတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆိုက်သည်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္financာငွေဖြင့်သာဖြစ်ပြီးဘဏ္theာရေး ၀ န်ထမ်းပေါ် မူတည်၍ ၅% မှ ၁၀% ကြားရှိပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်ရရှိသောရန်ပုံငွေအနည်းငယ်မျှသာဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မည်သူမဆိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဘဏ္Hostာရေးဆိုင်ရာအိမ်ရှင်၏ငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေထည့်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ developer များကငွေပေးချေမှုသည်သူတို့၏ငွေပေးချေသူများအား Stripe နှင့် PayPal ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။
ဒီအသိုင်းအဝိုင်း, အလှည့်အတွက်တစ် ဦး အတွင်း, အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့က်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ် Collective Host ကိုဖွင့်ပါအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
Collective Europe ကိုဖွင့်ပါ။ ဥရောပတစ်လွှားမှဖွင့်လှစ်သောအဖွဲ့များကိုကြိုဆိုရန်ဘရပ်ဆဲလ်တွင်အခြေစိုက်သည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း Open Source မဟာမိတ်အဖွဲ့။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်တောင်ပိုင်း၏ Drupal အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိ Drupal နှင့်ဆက်စပ်သော open source ဆော့ဖ်ဝဲ၏ပညာရေး၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည်။
"အနုပညာရှင်တွေအတွက်နဲ့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပလက်ဖောင်း။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအနုပညာရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်စင်မြင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်၏စွမ်းအားကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရန်၊ အနုပညာရှင်များအကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်၊ သင်ယူရန်နှင့်အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးရန်နေရာများဖန်တီးရန်နှင့်လူမှုအသွင်ပြောင်းမှုအတွက်လွတ်လပ်ပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။"
ထိုသူတို့ကလည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် «Open Collective »အောက်ပါကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မြင်နိုင်သည် link ကို.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်ရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည် အဓိကရည်မှန်းချက် လာမည့်:
"အခမဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏အခြေခံမူကိုလိုက်နာအရင်းရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိရိယာများဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်သောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှမိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေလိုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင်ဖြန့်ကျက်ရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ပြီး (တပ်ဆင်မည်) ဖြစ်သည်။"
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏2စိတ်ဝင်စားဖို့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် «Open Collective y Anartist»လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောယဉ်ကျေးမှု၊ မြင်၊ တွေးခြင်းနှင့်လုပ်ခြင်း၏အခြားရွေးချယ်စရာအမြင်တစ်ခုကိုမြှင့်တင်ပေးသောအွန်လိုင်းကွန်မြူနတီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အချို့သောအမှုအရာသို့မဟုတ်အခြေအနေများ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » Open Collective and Anartist - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောယဉ်ကျေးမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များ